Kooxda xiriirka caalamiga oo mar walba ka shira ? | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda xiriirka caalamiga oo mar walba ka shira ?
Copenhagen (Keydmedia) - Kooxda isku sheegta xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya (SCG) ayaa shir ay uga wada hadlayaan wax ay ku tilmaameen "xaalada Soomaaliya" uu uga furmayaa magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Denmark, Lene Espersen ayaa sheegay in shirka uu socon doono laba maalmood, isla markaana looga hadli doono arrimo ay ka mid yihiin xaaladda bini’aadannimo, ka bixitaanka Al-Shabaab ee Muqdisho iyo dhibaatooyinka burcad badeedda ay ka wadaan xeebaha Soomaaliya.
Shirka oo uu shir guddoominayo, ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Augustine Mahiga. Waxaa Soomaaliya uga qeyb galaya xubno ay ka mid yihiin: Cabdiwali Gaas, Shariif Sakiin, Injineer Yariisow iyo kuwo kaloo badan oo ayaguna Denmark dalxiis iyo Shoping halkaas u yimid. Kooxdaan isku sheegta xiriirka Caalamigaa ayaa hada la soo gaaray Sanadkii 7aad oo ay ka shirayaan wax ay ku sheegaan Arimaha Soomaaliya, hadana ma jirto wax ka soo baxa oo Soomaali maslaxad ugu jirto.